Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ngwá Agha Kachasị Mma Megide COVID-19 Delta Ndịiche
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
COVID -19 Delta Variants - Nkpuchi America!
Ka ụdị COVID-19 Delta na-aga n'ihu na-agbasa ngwa ngwa gafee United States, erslọ Ọrụ Maka Mgbochi Ọrịa na Njikwa (CDC) ewepụtala nduzi ọhụrụ, ọkachasị n'ihe mkpuchi ihu, na-emetụtakwa ndị etinyela ọgwụ mgbochi ọ bụla. .
Ndụmọdụ kachasị mma sitere na CDC maka onye ọ bụla - gbaa ọgwụ mgbochi ma ọ bụ na ọ bụghị - bụ ikpuchi ya.
CDC na -ekwu na nke a dị ezigbo mkpa maka ndị nwere immunocompromised.
Ndị nọ n'ihe egwu dị ukwuu gụnyere ikpughere onye nyochara nke ọma yana ndị nwere ọrịa shuga, ọnọdụ obi, na oke ibu.
Mmelite CDC kachasị ọhụrụ dị ka ọ dị taa, Julaị 27, 2021, na-eduzi ndị mmadụ ọgwụ mgbochi zuru oke ma dabere na ihe akaebe ọhụrụ na ụdị B.1.617.2 (Delta) nke na-agagharị ugbu a na United States.
CDC gbakwụnyere ndụmọdụ maka ndị nwere ọgwụ mgbochi zuru oke ka ha kpuchie nkpuchi na ntọala ime ụlọ ọha na mpaghara nke nnukwu mgbasa ma ọ bụ nke dị elu. Ọzọkwa, ihe CDC kwuru na ndị ahụ nwere ike chọọ iyi nkpuchi n'agbanyeghị ọkwa nnyefe, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha nwere mgbochi ma ọ bụ nwee nnukwu ihe egwu maka ọrịa siri ike site na COVID-19.
Otu ihe a na -emetụtakwa ma ọ bụrụ na ọ dị onye nọ n'ezinụlọ ha nke na -enweghị ọgwụ mgbochi, n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke ọrịa siri ike, ma ọ bụ na agbanyeghị ọgwụ mgbochi. Ndị nọ n'ihe egwu dị ukwuu maka ọrịa siri ike gụnyere ndị okenye na ndị nwere ọnọdụ ahụike ụfọdụ, dịka ọrịa shuga, oke ibu ma ọ bụ oke ibu, yana ọnọdụ obi.